मासु खाँदा कति फाइदा कति बेफाइदा ?
दशैँको मूख्य खान्की नै मासु । तर जान्ने बुझ्नेहरु भन्छन् मासुले स्वास्थ्यमा हानी गर्छ । मासु स्वास्थ्यमैत्री खानेकुरा होइन । मासु रोगको स्रोत हो । मासु त्यसबेला हानिकारक बन्छ, जब सही किसिमको मासु छनौट गर्न सकिँदैन, सही ढंगले भण्डारण गर्न सकिँदैन, सही ढंगले पकाउन जानिँदैन, सही ढंगले खान जानिँदैन । यदि सही ढंगले, सही मात्रामा मासु सेवन गर्ने हो भने त्यसले हानी होइन, फाइदा गर्छ ।
के पाइन्छ मासुमा ? धेरैले मासुलाई प्रोटिनको राम्रो स्रोतको रुपमा बुझ्ने गर्छन् । कतिपय गेडागुडीबाट मासुमा भन्दा पनि प्रोटिन पइने गर्छ तर मासुबाट प्राप्त हुने प्रोटिन गेडागुडीबाट पाइनेमा भन्दा बढी वायोलोजीकल भ्यालु हुन्छ । यसको अर्थ भनेको मासुमा भएको प्रोटिनलाई शरीरले बढी सोस्न र प्रयोग गर्न सक्छ ।
आइरन : मासु आइरनको राम्रो स्रोत हो । सागसब्जी, तरकारी, फलफूलबाट पनि आइरन पाइन्छ तर मासुबाट हेम(आइरन पाइन्छ । जुन आइरनलाई शरीरले वनस्पतिबाट पाइनेभन्दा बढी सोस्न सक्छ । शरीरमा आइरनको कमी भएमा रगतको कमी हुन गई रक्तअल्पताको समस्या निम्तिन्छ ।
भिटामिन–बी–१२ : मासुमा पाइने अर्काे महत्वपूर्ण भिटामिन भनेको भिटामिन–बी–१२ हो । जुन वनस्पतिजन्य खाद्यपदार्थबाट प्राप्त गर्न सकिँदैन । पछिल्लो समय धेरै मानिसमा भिटामिन– बी–१२ को कमी देखिन थालेको छ । यसको कमीले खुट्टा छिटो निदाउने, हात खुट्टा कटकट खाने, चाडै बिर्सने र रगतको कमी हुने, डिप्रेसनलगायतको समस्या निम्तिन सक्छ ।
अन्य पौष्टिक तत्व : मासुबाट फ्याट, भिटामिन बी, ए, के, पोटासियम, फोस्फोरस, जीकं, म्याग्नेसियमलगायतका पौष्टिक तत्व पनि प्राप्त हुन्छ । जुन स्वास्थ्यको लागि अतिआवश्यक छ ।
रातो मासु– रातो मासु भन्नाले नपकाएको अवस्थामा रातो देखिने खसी, राँगा, संँगुर आदिका मासु हुन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार रातो मासु क्यान्सर लाग्ने कारणमध्ये एक हो । यसअर्थ पनि रातो मासु स्वास्थ्यको दृष्टिले राम्रो मानिदैन । रातो मासुमा जिंक, आइरन, भिटामिन बी–६, बी–१२, बी–१, बी–२ भने सेतो मासुको तुलनामा बढी हुन्छ । त्यस्तै रातो मासुमा फ्याटको मात्रा पनि बढी हुन्छ । तर, कुखुराको छातीमा भने बढी बोसो हुने गर्छ । सुँगुरको मासुमा बोसोको मात्रा अरु मासुको तुलनामा अत्याधिक हुन्छ ।
तर, यसको बोसो कुखुरा, खसि र राँगाकोजति हानीकारक भने हुँदैन । किनकी यसमा कोलेस्ट्रोल फ्याटको मात्रा कम हुन्छ र अनस्याचुरेटेट फ्याट बढी हुन्छ । जुन स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो । सुन्दा अचम्म लाग्छ तर सबै भन्दा पोषिलो प्राकृतिक खाद्यहरु भनि गरिएको एक हजारभन्दा बढी खाद्य अनुसन्धानले सुँगुरको बोसोलाई ८ औं स्वस्थकरको सूचीमा रखेको छ ।
सेतो मासु – त्यस्तै नपकाएको अवस्थामा सेतो देखिने कुखुरा, माछा र हाँसका मासु सेता हुन् । यी दुईमध्ये रातो मासु खानु हुदैन भन्ने भनाई प्रचलनमा छ । तर अहिले रातो मासु कम खाने हुदा सेतो मासुमा पनि विशेष गरि ब्रोइलरको प्रयोग बढी हुने गरेको छ । तर, यस्ता खालका कुखुरामा विभिन्न हर्मोन, एन्टिवायोटिकको अत्याधिक प्रयोग गरिएको हुन्छ । जसले गर्दा सेतो मासुले मानव स्वास्थ्यमा जति फइदा पुर्याउनु पर्थ्यो त्यो नपुग्ने देखिन्छ । त्यसैले घरमै पालेको कुखुराको मासु प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ । रातो र सेतो आ–आफ्नै फाइदा–वेफाइदा छन् । यदि कसैलाई रातो मासु नखानु भनिएको छ भने (युरिक एसीड, कोलेस्टेरोल, उच्च रक्तचाप, मुटु रोग, बाथ), सेतो मासु खादा पनि त्यतिकै ध्यान दिन जरुरी हुन्छ ।
हुन त मासुको नाम सुन्ने बित्तिकै धेरैको –याल चुहिन्छ तर स्वादिष्ट भएपनि स्वास्थ्यका लागि यो हानिकारक नै हुन्छ । यहाँ हामी यसका हानिहरू बताउँछौं । मासु खाने धेरैजसो मानिसहरू चिढिइरहन्छन् र जतिखेर पनि रिसाइरहन्छन् । यिनीहरूको स्वभाव पनि उग्र हुन्छ । मासु खाँदा तपाईंको शरीर र मन दुवै अस्वस्थ रहन्छ ।मांसाहारीहरू शाकाहारीका तुलनामा गम्भीर रोगको बढी शिकार हुन्छन् । यी रोगमा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटुरोग, क्यान्सर, मृगौला बिग्रने, बाथ र अल्सर पर्छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदनअनुसार, मांसाहारले धूम्रपानजत्तिकै हानि गर्छ । मासु खानेलाई क्यान्सरको खतरा बढी हुन्छ । शाकाहारी स्वस्थ, दीर्घायु, निरोगी र तन्दुरस्त हुन्छ । बर्ड फ्लु र स्वाइन फ्लु जस्ता रोग मासु खानेलाई नै लाग्छ । संसारको एक चौथाइ प्रदूषणको कारण मासु नै हो । मानिसहरूले मासु खान छोड्ने हो भने ७० प्रतिशतसम्म प्रदूषण कम हुन्छ । मासुका लागि हुर्काइने जनावरले अत्यधिक पानी र प्राकृतिक स्रोत उपयोग गरिदिन्छन् ।
मासु खाने मानिसको उमेर पनि छोटो हुन्छ । मासु महंगो पनि छ । यसमा पैसा खर्च गर्नुको साटो अरू कुनै असल काममा लगाउनुस् । मांसाहारीहरू शाकाहारीका तुलनामा डिप्रेसनको शिकार बढी हुन्छन् ।मासु पचाउन धेरै समय लाग्छ । मान्छेको आन्द्रा हिंस्रक जनावरको जस्तो ठूलो हुँदैन त्यसैले मासु पचाउन मुश्किल पर्छ ।धैरै मानिसले स्वादका लागि मासु खाने गर्छन ।
मासुमा स्वाद मात्र नभएर शरीरलाई आवश्यक पोषण पनि हुन्छ । तर, मासुको अत्यधिक प्रयोग भने मानव स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक छैन । स्वादकै लागि मानिसले बिहान–बेलुकी नै मासु प्रयोग पनि गर्छन् । जसले मानिसलाई फाइदाभन्दा बढी बेफाइदा गर्छ ।
यस्ता मासु स्वस्थकर : मासुमा प्रोटिन, चिल्लो पदार्थ, भिटामिन, खनिज पदार्थ र पानीको मिश्रण रहेको हुन्छ । जसको प्रयोगले शरीरलाई फाइदा पुर्याएको हुन्छ । तर, उसिनेको मासु प्रयोग गर्दा स्वास्थ्यका लागि बढी हितकर हुन्छ । उसिनेको मासु खाँदा अनावश्यक चिल्लो पदार्थबाट बच्न सकिन्छ । मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मिर्गौलाको समस्या, कोलेस्ट्रोल बढी भएमा बोसो नभएको मासु प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ ।
सकभर रातो मासु कम खानुपर्छ । सेतो मासु भने स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिन्छ । तुलनात्मक रूपमा खसी, सुँगुर, राँगाको भन्दा कुखुराको मासु र माछा प्रयोग गर्नु बढी श्रेयष्कर हुन्छ। कतिपय मानिसले मासुमा भएको बोसो अत्यधिक प्रयोग गर्ने गर्छन् । गाउँघरतिर त छुट्टै निकालेर बोसो खाने प्रचलनसमेत छ । तर, स्वास्थ्यका लागि भने सकेसम्म बोसो निकालेर मात्र मासुको प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ ।
दशैमा तपाईले बध,वली चढाएको पशु पंक्षिवाट प्राप्त हुने मासु सके चाडै पकाउनु होला पकाउन झन्झट लागे डिप फ्रिज वा फ्रिजमा राख्नु होला । पकाएको मासु राम्रो सित छोपेर फ्रिजमा राख्नु होला खाना खाने वेलामा राम्रो सित तताउनु नै वेश हुन्छ । यसो गरिे चाडबाडको वेला खाएको मासुवाट स्वास्थ्यमा असर नगर्ला की  । बढी चिल्लो र पिरो बनाएर मासु खानु हुँदैन । यसरी खाँदा ग्यास्ट्रिक, प्रेसर, बान्ता, अपच, फुड पोइजनलगायत समस्या आउन सक्छ । शरीरका लागि केही मात्रामा राम्रो मानिए पनि धेरै मासुको प्रयोगले भने हानि गर्न सक्छ । त्यसैले दिनमा तीन–चार पिस मात्र मासु प्रयोग गर्नुपर्छ ।